Umuntu uphila phakathi kokukhanya, kodwa akabuboni ubugugu bokukhanya. Akasinaki isimo sokukhanya, nesomthombo wokukhanya, futhi ngaphezu kwalokho, kulowo okungokwakhe. Lapho ngethula ukukhanya phakathi kwabantu, ngokushesha ngihlola izimo phakathi kwabo: Ngenxa yokukhanya, bonke abantu bayaguquka, bayakhula futhi babushiyile ubumnyama. Ngiye ngabheka wonke amagumbi omhlaba, futhi ngabona ukuthi izintaba zihaqwe yinkungu, ukuthi amanzi ayiqhwa ngenxa yamakhaza, nokuthi ngenxa yokufika kokukhanya, abantu babheka eMpumalanga ukuze bathole okuthile okuyigugu kakhulu—kodwa umuntu uhlala engakwazi ukwehlukanisa indlela ecacile phakathi kwenkungu. Ngenxa yokuthi umhlaba wonke umbozwe inkungu, uma ngibheka emafwini, ubukhona Bami abubonakali kumuntu; umuntu ufuna okuthile emhlabeni, ubukeka ecingisisa, kubonakala sengathi yilokho akuhlosile, ukulindela ukuza Kwami—kodwa akalwazi usuku Lwami, angabuka nje ukukhanya okuvela eMpumalanga. Phakathi kwabo bonke abantu, ngifuna labo abafuna inhliziyo Yami ngeqiniso, ngihamba phakathi kwabo bonke abantu, ngihlale phakathi kwabo bonke, kodwa umuntu uphephile emhlabeni, ngakho abekho abafuna inhliziyo Yami ngempela. Abantu abazi ukuthi bayenze kanjani intando Yami, abaziboni izenzo Zami, futhi abakwazi ukunyakaza ekukhanyeni bakhazinyuliswe yikho. Noma umuntu elokhu ewazisa amazwi Ami, akakwazi ukubona amaqhinga kaSathane okukhohlisa; ngenxa yokuthi isiqu somuntu sincane kakhulu, akakwazi ukwenza ngendlela inhliziyo yakhe efisa ngayo. Umuntu akaze angithande ngokweqiniso. Uma ngimphakamisa, uzizwa engafaneleki, kodwa lokhu akumenzi ukuba azame ukungenelisa. Uvele abambe isiteshi engimnike sona ezandleni zakhe asihlolisise, akanazwela ebuhleni Bami, kodwa kunalokho uyakhukhumala yizibusiso zesiteshi sakhe. Ingabe lokhu akubona ubuthaka bomuntu? Uma izintaba zinyakaza, zingakugwema ukuza la ukhona? Uma amanzi egeleza, angema phambi kwala ukhona? Ingabe izulu nomhlaba kungahlehliswa yila ukhona? Ngike ngaba nesihawu kumuntu, kaningana impela—kodwa akekho ongazisayo noma owenza lokhu igugu, bavele balalele njengendaba, noma bafunde sengathi bafunda inoveli. Ingabe amazwi Ami awayithinti inhliziyo yomuntu? Ingabe amazwi Ami awanamphumela? Ingabe kungenxa yokuthi akekho okholelwa ekubeni khona Kwami? Umuntu akazithandi, kunalokho uhlangana noSathane ukungihlasela, asebenzise uSathane “njengempahla” yokungisebenzela. Ngizongena kuwo wonke amaqhinga kaSathane, nginqande abantu emhlabeni ukwamukela ukukhohliswa nguSathane, ukuze bangangiphikisi ngenxa yokuba khona kukaSathane.
Abantu emhlabeni wonke babungaza ukufika kosuku Lwami, nezingelosi zihamba phakathi kwezihlwele. Uma uSathane edala inkinga, izingelosi ngenxa yomsebenzi wazo ezulwini, zihlala zisiza abantu Bami. Abakhohliswa uSathane ngenxa yobuthakathaka bomuntu, kodwa ngenxa yokuhlaselwa yimisebenzi yobumnyama, bazama ngokwengeziwe ukuhlangana nempilo yomuntu enkungwini. Bonke abantu bazithoba ngaphansi kwegama Lami, futhi akekho ovelayo ukuba angiphikise. Ngenxa yemisebenzi yezingelosi, umuntu wamukela igama Lami futhi konke kuphakathi kohide lomsebenzi Wami. Umhlaba uyawa! IBhabhiloni alikwazi kwenza lutho! Umhlaba wenkolo—ungahlala kanjani ungabhujiswa ngamandla Ami emhlabeni? Ubani osalokotha ukungangilaleli nokungiphikisa? Ababhali? Zonke izikhulu zenkolo? Ababusi nabasemagunyeni emhlabeni? Izingelosi? Ubani ongabungazi ukuphelela nokwenela komzimba Wami? Phakathi kwabo bonke abantu, ubani ongaculi amaculo Ami angaphezi, ubani ojabule ngokungapheli? Ngihlala emhlabeni wekhaya likadrako omkhulu obomvu, kodwa lokhu akungenzi ukuba ngithuthumele ngokwesaba noma ngibaleke, ngoba bonke abantu bakhe sebeqalile ukumenyanya. Akukaze kube khona “umsebenzi” wanoma yini owenziwa phambi kukadrako; kunalokho, zonke izinto zenza njengokubona kwazo, zikhetha indlela ezifanele kahle. Kungenzeka kanjani ukuba amazwe emhlabeni angashabalali? Kungenzeka kanjani ukuba amazwe emhlabeni angawi? Kungani abantu Bami bengahalalisi? Kungani bengaculi ngenjabulo? Ingabe lokhu kungumsebenzi womuntu? Ingabe ngumsebenzi wezandla zomuntu? Nginikeze umuntu imvelaphi yakhe, ngamnikeza izinto ezenziwe ngezandla, kodwa umuntu akakeneli ngesimo sakhe samanje ucela ukungena embusweni Wami. Kodwa angangena kanjani embusweni Wami kalula kanjalo, ngaphandle kokukhokhela intengo, nokungazimiseli ukunikela ngokuzinikela okungenabumina? Kunokufuna okuthile kumuntu, ngenza izidingo kuye, ukuze umbuso Wami emhlabeni ugcwale inkazimulo. Umuntu ubelokhu eholwa Yimi ukuya enkathini yamanje, ukhona ngalesi simo, futhi uphila phakathi kokuholwa ukukhanya Kwami. Uma bekungenjalo, ubani phakathi kwabantu emhlabeni ongazi amathemba abo? Ubani ongaqonda intando Yami? Ngifaka imihlinzeko Yami ezidingweni zomuntu; ingabe lokhu akuhambelani nemithetho yemvelo?
Izolo niphile phakathi komoya nemvula, namuhla ningene embusweni Wami naba ngabantu bawo, kanti kusasa nizojabulela izibusiso Zami. Ubani oke wacabanga ngezinto ezinjalo? Bungakanani ubunzima nobulukhuni ozobazi empilweni yakho, ingabe niyazi? Ngiyaqhubeka phakathi komoya nemvula, futhi ngichithe iminyaka ngeminyaka phakathi kwabantu, lokho kulandelwa usuku lwanamuhla. Ingabe lezi akuzona izinyathelo zohlelo Lwami lokuphatha? Ubani oke wengeza ohlelweni Lwami? Ubani ongasuka ezinyathelweni zohlelo Lwami? Ubani ongasuka ezinyathelweni zecebo Lami? Ngiphila ezinhliziyweni zamakhulu ezigidigidi zabantu, ngiyiNkosi phakathi kwamakhulu ezigidi zabantu, kanti ngilahlwe futhi ngazondwa amakhulu ezigidi zabantu. Umfanekiso Wami awukho ngempela enhliziyweni yomuntu. Umuntu ubuqonda kalufifi ubuso Bami benkazimulo emazwini Ami, kodwa ngenxa yokuphazamiseka emcabangweni wakhe, akayethembi imizwa yakhe; kukhona nje Mina ongaqondakali enhliziyweni yakhe, kodwa akuhlali lapho isikhathi eside. Ngakho, uthando lwakhe Ngami lunje: uthando lwakhe Ngami luyaguquguquka, sengathi ungithanda njengoba efisa, sengathi uthando lwakhe lungena luphuma endaweni ngaphansi kokukhanya kwenyanga okunenkungu. Namuhla, kungenxa nje yothando Lwami ukuthi umuntu aphile futhi abe nenhlanhla enhle yokuziphilisa. Uma bekungenjalo, ubani phakathi kwabantu obengeke, ngomphumela womzimba wakhe owohlokayo, ashaywe phansi ukukhanya okubomvu? Umuntu ukakazazi. Uyaziveza ngaphambi Kwami, angiqhoshele lapho ngemva Kwami, kodwa akekho ongalokotha “angiphikise” phambi Kwami. Noma kunjalo, umuntu akayazi incazelo yalokho okuphikisayo engikhuluma ngakho; kunalokho, ulokhu ezama ukungikhohlisa, elokhu eqhubeka eziphakamisa—ngalokhu, ingabe akangiphikisi esidlangalaleni? Ngiyakubekezelela ubuthakathaka bomuntu, kodwa anginaso isihawu nakancane uma kufika ekuphikiseni okwenziwa ngumuntu ngokwakhe. Yize eyazi incazelo yakhona, akazimisele ukwenza ngendlela yencazelo yakhona kodwa angikhohlise ngendlela athanda ngayo. Ngiyacacisa ngesimilo Sami njalo emazwini Ami ngaso sonke isikhathi, kodwa umuntu akakabuyisani nokunqotshwa—ngaso leso sikhathi, uveza isimilo sakhe. Phakathi kokwahlulela Kwami umuntu uzokholwa ngokuphelele, futhi naphakathi kokujezisa Kwami uzogcina ebe ngumfanekiso Wami futhi abe yisibonakaliso Sami emhlabeni!
kuNdasa 22, 1992